Mero Report :: विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी सवाल समुह
विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी सवाल समुह
यो समुहमा तपाँईको समुदायमा भएको वा हुनसक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् ब्यवस्थापन क्षेत्रको सुशासन सम्बन्धी समस्या, सवाल र सवाल सम्बोधन गर्ने स्थानीय उपायबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।
Apr 03, 2019 Wednesday
विपद्को पुर्वतयारी र न्युनीकरण गर्नका लागि सरकारी निकाय र नागरिक समाजले कस्तो पहल गर्नुपर्दछ ?
विपद् आएको समयमा मात्र सक्रियता देखाउँने र अरुबेला अलमल गर्ने प्रवृतिका कारण नेपालमा बर्षेनी विभिन्न ठाउँहरुमा जनधनको क्षति हुनेगरेको छ । पूर्वानुमान तथा विपद्सँग जुध्नका लागि पूर्वतयारीको योजना र प्रविधिको यथोचित व्यवस्थापनको प्रयास भएको देखिदैन । हालसालै मात्र पनि असिना र पानीसँगै आएको हावाहुरीले बारा र पर्सामा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुनपुग्यो । विपद्को पुर्वतयारी र न्युनीकरण गर्नका लागि सरकारी निकाय र नागरिक समाजले कस्तो पहल गर्नुपर्दछ ? कृपया आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला ।
Sher Bdr Bhujel
बिपद् जोखिम न्युनिकरण र पुर्व तयारीका लागि हाम्रा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । हाम्रा धेरै जसो गाँउपालिका नगरपालिकाहरुले स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण गर्न तर्फ अग्रसर हुन सकेका छैन् । केही नागरिक समाजका संस्थाहरुको पहलमा केही स्थानीय तहरुले योजना निर्माण गरेपनि कार्यन्वयनमा भने ल्याउन सकेका छैनन् । यसै गरी तत्काल राहत र खोज तथा उद्धार कार्यका लागि कोष स्थापना गर्ने तर्फ पनि हाम्रा स्थानिय तहहरुले ध्यान दिन सकेका छैनन् । विपद्बाट हुने क्षतिलाई कम गर्नका लागि पुर्व सचेतना प्रणाली स्थापन गर्ने तर्फ बढी जोड दिनु पर्ला । यस कार्यको लागि स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजन गर्न पनि आवश्यक छ ।
विपद् बाजा बजाएर आउदैन ।जुनसुकै बेला आउनसक्ने हुनसक्ने विपदबाट हुने क्षतिको लागि सरकारी निकायको पुर्वतयारीको योजना अतिआवश्यक छ ।विपद पुर्वतयारी र न्युनिकरणका लागि सरकारी निकायले आफुले बनाएको नीति योजनामा आमनागरिकलाई पनि सहभागी गराउनुपर्यो तबमात्र आमनागरिकले विपद् योजनाको बारेमा थाहा हुन्छ र आवश्यक तयारी र सहयोगको लागि स्थानीय तह,सरोकारवाला निकायसम्म खोजी गर्न पुग्छ सक्छ ।यसैगरी नागरिक समाज सस्थाले आमनागरिकलाई सचेत गराउने,पुर्वतयारी न्युनिकरणका लागि बारम्बार झगझक्याइरहन,सराकारी निकायले बनाएको योजना,तयारी कार्यन्वयन भयो कि भएन भन्ने कुराको पनि निगरानी गर्ने हो भने विपद आउनुभन्दा अगाडी पुर्वतयारी गरेर मानविय तथा भौतिक क्षतिमा कमि आउने थियो ।
Apr 02, 2019 Tuesday
विपद् आएको समयमा मात्र सक्रियता देखाउँने र अरुबेला अलमल गर्ने प्रवृतिका कारण नेपालमा बर्षेनी विभिन्न ठाउँहरुमा जनधनको क्षति हुनेगरेको छ । पूर्वानुमान तथा विपद्सँग जुध्नका लागि पूर्वतयारीको योजना र प्रविधिको यथोचित व्यवस्थापनको प्रयास भएको देखिदैन । हालसालै मात्र पनि असिना र पानीसँगै आएको हावाहुरीले बारासहित पर्सा र रौतहटमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुनपुग्यो । विपद्को पुर्वतयारी र न्युनीकरण गर्नका लागि सरकारी निकाय र नागरिक समाजले कस्तो पहल गर्नुपर्दछ ? कृपया आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला ।